Izingulube zasendle (Potamochoerus larvatus) zitholakala ezingxenyeni ezisenyakatho nasempumalanga yeSouth Africa ezivela eningizimu yeKwaZulu-Natali, ngaphakathi kweFree State, naseMpumalanga kuya eNtshonalanga Kapa. Ngokusho kokuhlolwa kokulondolozwa kwePotamochoerus larvatus yiSouth African National Biodiversity Institute kanye ne-Endangered Wildlife Trust, ububanzi bomphakathi obuphakathi kuka-0,3 no-0,5 ezilwaneni ngamakhilomitha angamakhilomitha angama-square, nezindawo zasemakhaya zihluka phakathi kuka-3,8 km² kuya ku-10,1 km² kuye ngokuthi kutholakala yini ukudla.
Njengoba kuboniswe igama, izingulube zasemahlathini zinokubonakala okufana nengulube nokulandelela. Unemizimba enomzimba enobuchopho obunamakhanda ezindlebeni zabo. Izinwele zobuso ngokuvamile zilula kakhulu kunombala womzimba wonke. Abantu abadala bangakhula kufike ku-1.7 m ubude bese bekala lutho kusuka ku-46 kg ukuya ku-115 kg. Ziyodwa zodwa, ngamaqembu ngokuvamile aqukethe owesifazane oyedwa ozalisayo, owodwa we-alpha boar kanye nesizukulwane esisodwa noma ezimbili senzalo. Amantombazane alungele ukukhiqizwa kusukela ezinyangeni ezingu-21 ubudala, okhiqiza izingulube eziyisithupha ngamalitha. Amantombazane akha izidleke ngotshani.
Isibonelo Ngokomqulu we-Predation Management, izingulube zasemahlathini zisebenza kakhulu ebusuku kodwa zingabonakala ngesikhathi samahora apholile ngosuku uma zingashiywanga ngaphandle kokuphazamiseka. Ziyi-omnivores, besebenzisa izinyathelo zabo ezinzima ukuze ziqede ama-rhizomes, ama-bulbs nezilimo eziyizigaxa. Ngenkathi kubhekwa njengesiyaluyalu kommbila othile, ushukela, izithelo nezitshalo ze-nut, abajwayele ukudla emfuyweni yezolimo. Njengamabhokhwe, awalandeli uhlobo oluthile lokubulala futhi ngokuvamile basebenzisa amathanga abo ukuze aqede amaxhoba avulekile. Badla cishe zonke izidumbu futhi badla amahle kakhulu
I-Manufacturing Management Manual ixwayisa ukuthi abalimi bangavimbela ukulimala kwezitshalo kanye nemfuyo ngezingcingo ezakhiwe kahle, okungenani okungamatshini amabili okufakelwa amandla. Ngaphandle kwalokho, abalimi kufanele bahlakulele imfuyo engcupheni ebusuku noma basebenzise abelusi, baqaphe izilwane noma umsindo, izibani ezikhanyayo noma eziphunga ukuvimbela ukulahlekelwa. Izingibe zokuhamba ngezinyawo ezingenakwenzeka ziyanconywa ukuba zithole izingulube zasemahlathini.
I-Manual Creation Manual ikhuthaza abalimi ukuba basebenzise ukuhamba phambili ukuze bathole izingulube zisetshenziselwa izicupho bese bethola ama-captures amaningi. Ngemvume efanele, izingulube zasendle zingase zizingelwe ngezinja noma ebusuku. Izinja zokuzingela, ngezizathu zenhlalakahle yezilwane, kufanele zingaphinde zithintane nezingulube zasendle.